Inona ny dikan'ny vavak'i Jabez | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Inona ny dikan'ny vavak'i Jabez?
Inona ny dikan'ny vavak'i Jabez?
Febroary 27, 2019
1 Tantara 4: 9-10:
9 Ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahiny; dia ny anarany nataony hoe Jabeza, fa hoy izy: Satria nalahelo aho. 10 Ary Jabez niantso an'Andriamanitry ny Isiraely hoe: Enga anie ka hitahy ahy tokoa ianao sy hanitatra ny morontsirako, ary ny tananao homba ahy, ary hiaro ahy amin'ny ratsy ianao, ka tsy hampahory ahy! Ary dia nomen'Andriamanitra izay nangatahiny izany.
Ny vavak'i Jabez dia iray amin'ireo vavaka lehibe indrindra ao amin'ny Baiboly izay azontsika ianarana betsaka. Vitsy kely dia voalaza momba an'i Jabez ao amin'ny baiboliny, fa ny lesona avy amin'ny fiainany dia iray izay tsy ho reraka mihitsy amin'ny fotoan'ny fiainantsika. Androany isika dia hijery ny dikan'ny vavak'i Jabez, hojerentsika ihany koa ny lesona avy ao, ny fomba ihatra amintsika ary koa ny teboka ao amin'ny vavaka izay nalaina na nentanin'ny aingam-panahy avy amin'ny vavak'i Jabez. Ny tanjon'ity lahatsoratra ity dia ny hitari-dàlana anao amin'ny fikatsahanao ara-panahy mba hahatratrarana ny fahalehibeazana, ary koa hanampy anao handresy ireo sakantsakana ara-panahy izay hitsangana eo amin'ny lalanao hanakana anao tsy handroso eo amin'ny fiainana. Ankehitriny andeha hojerentsika ny dikan'ny vavak'i Jabez.
Ny Vavak'i Jabez, Midika.
Mba ho fantarintsika ny dikan'ny vavak'i Jabez dia andao aloha hijery ny fiainan'i Jabez aloha. Milaza ny 1 Tantara 4: 9 fa milaza amintsika ny Baiboly fa mendri-kaja kokoa noho ny rahalahiny rehetra i Jabez. Ny hoe olona mendri-kaja dia tokony ho tsara ara-pitondran-tena, ara-pitondran-tena, manana andraikitra ary marina. Ireo hatsarana rehetra ireo dia hita tamin'ny fiainan'i Jabez, kanefa izy dia olona malahelo. Na dia olona tsara sy nanao ny marina aza i Jabez, izay natahotra ny Tompo, dia feno karazana afobe sy ny olana maro ny fiainany. Ny fanontaniana ankehitriny dia izao: maninona no olona tsara tarehy toy izany no iharan'izany toe-javatra mahatsiravina izany? Ny valiny dia fototra.
Jabez dia teraka tamin'ny a diso fototra, milaza amintsika ny Baiboly fa nantsoin'ny reniny hoe Jabez izy satria teraka tao anaty alahelo. Jabez dia nomena anarana iray izay mitovitovy amin'ny alahelo. Nanomboka tamin'ny fahaterahany ny olan'i Jabez, dia nanomboka niady tamin'ny androm-piainany izy. Na tsara na kely aza izy dia tsy tonga taminy akory ny tsara. Na dia lehilahy manan-kaja izy, nefa tsy misy zavatra manaja azy. Betsaka ny mino an'i Kristy ankehitriny, fa mijaly amin'ny olana fototra, toa an'i Jabez ny fototry ny fahaterahana dia diso ary nanomboka niantraika tamin'ny ambiny sisa izany. Jesosy Kristy irery ihany, amin'ny alàlan'ny vavaka no afaka mamonjy sy manafaka azy ireo. Andeha hojerentsika ny fomba handresena olana fototra.
Fandresena ny olana momba ny fototra.
Ny olana Jabez dia nanomboka rehefa nomena ny anarana hoe 'Jabez' izy. Ao amin'ny tontolon'ny ara-panahy dia manana rohy mivantana amin'ny anjaranao ny anaranao. Mampidi-doza ny manome anarana ratsy ny zaza. Ny anarana entinao dia mety hitahy anao na ozona ho anao. Tena liana amin'ny anarana Andriamanitra, niresaka manokana momba ny anaran'ny zanany foana Izy, satria fantany fa izay nantsoina no nahatongavanao.
Ny dingana voalohany handresena ireo olana eo amin'ny fototra dia ny manamarina ny dikan'ny anaranao ary raha tsy tsara sy mifanaraka amin'ny soratra masina izany dia ovao izy. Andao isika hijery ohatra vitsivitsy momba ny maha-zava-dehibe ny anarana amin'ny ady ara-panahy.
Ny dikan'ny anarana amin'ny ady ara-panahy
1). Abrama ho an'i Abrahama: Genesisy 17: 15-16.
Ao amin'ny Genesisy 12: 1, nantsoin'Andriamanitra hoe Abrahama, i Abrahama dia mpiandry omby manankarena izay nampanantenain'Andriamanitra fa ho Rain'ny firenena maro. Saingy nanana olana fototra i Abrahama, tsy nanan-janaka izy sy ny vadiny ary 75 taona izy tamin'ny fotoana niantsoan'Andriamanitra azy. Tao amin'ny toko faha-17 amin'ny bokin'ny Genesisy, nanova ny anarany avy tamin'i Abrama Andriamanitra, izay midika hoe Ray Manandratra, ho an'i Abrahama izay midika fa rain'ny maro, Andriamanitra koa dia nanova ny anaran'ny vadiny avy amin'i Sarai, ho an'i Sarah izay midika hoe renin'ny maro. Taorian'ny fanovana anarana, dia nanana zanakalahy biolojika i Sarah vadiny avy amin'i Sarah vadiny. Hitanao fa mila miova anarana Andriamanitra mba hifanaraka amin'ny drafiny sy ny tanjony amin'ny fiainany .Tsy afaka miantso ny tenanao ho anarana ratsy ianao ary manantena ny hitranga aminao. Mahery ny anarana.
2). Jakoba mankany Isreal, Genesisy 32:28.
Ny anarana hoe Jakôba dia midika hoe mpisolo toerana, midika izany fa olona misolo toerana ny toeran'olona hafa. Nanomboka niasa tamin'ny fiainan'i Jakôba io anarana io. Nofitahiny aloha ny zon'ny rahalahiny tamin'ny nahaterahany, ary avy eo nangalariny ny tso-dranon'i Esao. Nihazakazaka nankany amin'ny tranon'i Labana izy, havany izay namitaka azy koa nandritra ny 14 taona mahery. Nandositra foana i Jakôba mandra-pandrenesany fihaonana tamin'Andriamanitra ao amin'ny Genesisy 32, izay nanovan'Andriamanitra ny anarany avy tamin'i Jacob ho Isreal. Ny zava-drehetra manodidina azy dia nivadika rehefa nanova ny anarany Andriamanitra.
Hitantsika ihany koa ny vokatry ny anarana tamin'ny fiainan'i Ichabod zafikelin'i Eli, ilay reny antsoina hoe Ichabod satria ny tena izy dia nanjary ny voninahiny 1 Samoela 4:21, ny hafa dia hita ao amin'ny Lioka 1: 5-25, Lioka 1: 26-38.
Ny dingana faharoa handresena ireo olana fototra toy ny an'i Jabez dia amin'ny alàlan'ny vavaka mahery. Amin'ny maha mpino antsika dia iray amin'ny fitaovam-piadiantsika ny vavaka. Nivavaka i Jabez mba hiala amin'ny fahoriana mafy niaretany hatramin'ny nahaterahany. Izy aloha no nandinika ny tany aoriana ary nahita fa ny olany dia nanomboka tamin'ny andro nahaterahany ary nomena anarana diso. Nanomboka nivavaka tamin'Andriamanitra àry izy mba hanovana tantara iray. Ny Baiboly dia milaza amintsika fa namaly ny vavak'Andriamanitra Andriamanitra ary nanitatra ny faritany. Raha miady amin'ny fanamby ianao anio, raha sendra olana iray na olana hafa ny fiainanao, dia ny fotoana hampiadianao ady ara-panahy fa aza mivavaka am-bavaka jamba fotsiny, manaova fikarohana, tadiavo araka izay ilainao. fantaro ny momba anao, jereo ireo anarana nomen'ny ray aman-dreninao anao ary tadiavo ny dikany ara-panahy sy ny dikan'ireo anarana ireo. Eto Afrika, olona marobe, anisan'izany ny Kristiana, no voatonona anarana amin'ny sampy, andriamanitra ary andriamanitra samihafa amin'ny tany. Raha ny zava-misy, amin'ireo anarana ireo, fianakaviana maro any Afrika no manana olana ara-pananahana na razana. Izany dia satria tamin'ny alàlan'ny anarana tao, dia natokana ho an'ireo andriamanitra (demonia) tany izy ireo. Raharaha matotra io, tsy afaka miady amin'ny tsy fantatrao ianao. Ny vavak'i Jabez dia nandaitra satria fantany ny zavatra ivavahany, nivavaka vavaka kendrena izy. Rehefa fantatrao ny fototry ny olanao dia azonao esorina izany.
Ny vaovao tsara dia ity, tsy raharahako ireo anarana ratsy fa ny devoly dia nanonona anao, na izay anarana ratsy nantsoin'ny ray aman-dreninao anao, amin'ny anarana izay ambonin'ireo anarana rehetra, ny anaran'i Jesosy Kristy, hitako ny vokatry ny anaran'ny anarana rava amin'ny fiainanao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana fotsiny ianao ary mampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny ran'i Jesosy handringana sy hanasa ny vokatry ny anarana ratsy sy ny olana fototry ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Sahala amin'i Jabez, tsy maintsy mangataka amin'ny Tompo ianao hanitatra ny morontsiraka sy hanafaka anao tanteraka amin'ny herin'ny maizina amin'ny anaran'i Jesosy. Nanangona teboka vavaka aho avy amin'ny vavak'i Jabez hanampy anao mandoa vola ady ara-panahy manohitra ireo olana fototra. Mivavaha am-pinoana izy ireo anio ary jereo ny fanambinanao miovaova amin'ny anaran'i Jesosy.
Vavaka momba ny vavak'i Jabez
1. Ny fahavalon'ny ankohonana rehetra, manohitra ny fidirako, dia mianjera ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Ny namana tsy sakaiza rehetra, natolotry ny fitahiako hiely amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Maty amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahin'ny tsy fankatoavana sy ny fikomiana amin'ny fiainako.
4. Ny demony rehetra, mamelatra ny fanekena an'i Satana amin'ny fiainako, milatsaka ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Izay taova rehetra ao amin'ny vatako, izay eo amin'ny alàlan'ny alitara ratsy, mifangaro amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Amin'ny dian-dohan'i Jesosy, manozona ny fototry ny aretina rehetra amin'ny fiainako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Izaho dia manapotika ny vatofantsika rehetra amin'ny fanandevozana rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ny fanahy rehetra ao anatin'ny fiainako, mandao ny fihinanao, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Ny olana rehetra izay manohitra vahaolana amin'ny fiainako, ny ran'i Jesosy, dia manapotika azy, amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Ny hery rehetra, manohitra ny herin ’Andriamanitra eo amin’ny fiainako, dia mamely anao miaraka amin’ ny afon ’ny helatra, amin’ ny anaran’i Jesosy aho.
11. Ny tendrombohitra rehetra olan'ny olana mafy loha amin'ny fiainako, mianjera ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy
12. Izay tanana tsy hita maso rehetra, izay miasa ratsy amin'ny fiainako, malazo amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Ny demonia rehetra ao amin'ny fiainako dia maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Izaho dia mandà ny fanahy rehetra mandà ary manafoana ny asany eo amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Izaho dia mandà ka mandroaka ny tsy fahombiazana rehetra miorim-paka amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Ny toe-tsain'ny fahantrana rehetra ao amin'ny fianakaviako, ny fiainako tsy kandida anao, maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
17. afo ny Fanahy Masina, handoro ny akanjo rehetra amin'ny fahantrana amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Ny fanahy rehetra tsy fahombiazana amin'ny fiainako, manary ny fihinanao ary maty ianao, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Ny fanahy rehetra am-paosy, dia mandany ny volako, maty amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Manome didy aho fa tsy ho nisasatra foana aho. Ny olona iray hafa dia tsy hihinana ny vokatry ny asako, amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Ny fanahy ratsy rehetra amin'ny razana, mandao ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Samy manana fanahy ratsy tsy manam-pinoana amin'ny fiainako aho, vaky amin'ny ran'i Jesosy.
23. Ny olona rehetra mitahiry ny toe-tsain'ny tsy hivavaka amin'ny fiainako dia ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Ny fanahy rehetra, ny fangalarana ahy dia lavo ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Ny fanahy rehetra amin'ny fahajambana amin'ny fiainako dia maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Ny fanahy rehetra ao anaty fahantrana tao amin'ny fototra iorenako, dia maty amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Ny olana rehetra, nomanina ho amin'ny ho avy, tsy ho hitanao amin'ny antoandro, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Ny ady rehetra, amin'ny fidoboko any an-danitra, dia miparitaka amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Ny faribolana rehetra eo amin'ny fiainako dia ho faty, amin'ny anaran'i Jesosy
30. Noho ny ran'i Jesosy, dia ataoko tsy azo kitikitihana amin'izay hery ratsy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaka hanoherana ny fitiavan-tena sy ny sikidy
Next lahatsoratraNy vavaka amin'ny mamatonalina mba hahatanteraka ny tanjonao
Tina March 2, 2019 Ao amin'ny 8: 55 am
Azonao atao ny mampiasa fahantrana hilazana ny toe-javatra izay tsy ampy ny zavatra iray na mahantra ny kalitaony. [fanao] anglisy nijaly noho ny fahantrana.
Victor March 5, 2019 Ao amin'ny 8: 57 am
The Meaning ny anaran'i Jesosy dia Andriamanitra Famonjena. Ny niandohan'ny anaran'i Jesosy dia Grika. Fantaro bebe kokoa momba ny anaran'i Jesosy ao amin'ny BabyNames.com.
Ben 5 martsa 2019 Amin'ny 11:52 hariva
Betsaka ny safidy eny ivelany, ahoana no ahafahanao mahafantatra izay fandinihana tsara indrindra Malagasy? Ity torolàlana lalina ity dia hitari-dàlana anao amin'ny safidy mety aminao.
Alvaro 19 martsa 2019 Amin'ny 1:39 hariva
Tantara 14 vavaky ny jabez 2019
TRANONDRO DAVIDA 1 Mey 2021 Amin'ny 12:14 maraina
Zahao ny fampianarako ao amin'ny YouTube momba ny vavak'i Jabez: https://youtu.be/iDr_LQun2jQ #DiveDeepTog Together Fitahiana ho anao rehetra.
Teboka vavaka hanoherana ny lozam-pifamoivoizana
25 Torohevitra momba ny vavaka mba hanasitranana ny aretina rehetra sy ny aretina
Desambra 14, 2018
Vavaka 30 ho an'ny fiatoana amin'ny fifandraisana
Novambra 1, 2019